On mai 14, 2018 909
Soratra : Rakotonirainy Andry
Tsy mitsahatra mikaroka vahaolana ho fanampiana an’i Madagasikara ny Vondrona Eropeana, amin’ny alalan’ny fianakalozan- kevitra. Nisy ny zoma lasa teo ny ady hevitra niarahana tamin’ny minisiteran’ny toekarena sy varotra, sy ny mpiara- miombon’antoka teknika sy ara- bola. Niaraha-nijery ny olana sedraina eo tontolo toekarena eto Madagasikara sy ny fikarohana vahaolana hanatsarana izany.
Tapaka fa hatsangana ny « Guichet unique Export », ifandraisana mivantana amin’ny mpandraharaha. ankoatra izay, hajoro ny » Agence de Promotion des Exportations » na ny APEX, ho fanamorana ny sehatra ny fanondranana ny vokatra mankany ivelany, Indindra ny fanarahamaso ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny lafiny kalitao.
Namporisika ny tantsaha sy mpandraharaha ny Minisitry ny varotra Chabani NOURDINE mba hanohy ezaka sy hikajy ny kalitaon’ny vokatra. Anisan’ny nasian’ny tsindrim-peo manokana ny Lavanila, izay zary manenjika ny fabetsahan’ny vokatra fotsiny ny tantsaha fa tsy manome lanja ny hatsarany.
Nisy ny fifanaovan-tsonia mikasika ny famatsiam- bola mitentina 500 tapitrisa Euros teo amin’ny Vondrona Eropeana sy ny fanjakana malagasy, ny zoma lasa teo, hampiroboroboana ny sehatry ny varotra eo amin’ny roa tonta.
SMKAR CUA nanadio an’Analakely
HJRA AMPEFILOHA: L’UNITÉ DE DÉPISTAGE DES CANCERS EST RÉNOVÉE